उस्तै छ मुनामदनको क्रेज | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 09/20/2009 - 10:42
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जीवनको अन्तिम क्षणमा भनेका थिए-'मुनामदन बाहेक मेरा अरू सबै सिर्जनाहरू जलाइदिनु ।' सिर्जनाहरू मध्येबाट किन मुनामदनलाई मात्र माया गरेका होलान् त ? उनलाई थाहा हुनुपर्छ, कृति कालजयी हुनेछ र यसको महत्त्व युगयुगसम्म पनि उत्तिकै रहनेछ । देवकोटा बाँचिरहेको भए आज उनी सय वर्षका हुने थिए । साहित्यिक फाँटले देवकोटा सतवाषिर्की मनाइरहेछ । वि.सं. १९९२ मा प्रकाशित मुनामदन खण्डकाव्य अहिले चौहत्तर वर्षको भयो, तर त्यसको क्रेज अहिले पनि उस्तै छ । पाठकहरूको संख्यामै कमी आएको छैन, न त्यसभित्रको कथावस्तु- जुन देवकोटाले तत्कालीन देशको गरिबी र गरिबीको कारण मदनजस्ता युवाहरूले विदेशिनुपरेको यथार्थमा नै परिवर्तन आएको छ ।
ऋणको भारले थिचिँदै गएपछि गरिबीबाट मुक्ति पाउने आसामा मदनले ल्हासाको सुनको सपना देख्न थाल्छ । अनि साहूको ऋण तिर्न, बूढी भएकी आमाको 'पाटी-पौवा' बनाउने सपना पूरा गर्न र आफ्नी प्यारी मुनाको हातमा सुनको बाला लगाइदिने चाहना पूरा गर्न मदन भोटतिर लाग्छ । त्यतिबेला धन कमाउन भोट जाने मदनमात्र एक्लो पात्र थिएन भन्ने कुरा मदनलाई हैजा लागेको बेला उसको साथ दिनुको सट्टा 'ईश्वर सम्झेर बस है' भन्दै साथीहरूले जंगलमा एक्लै छाडेर हिँड्नुबाट प्रस्ट हुन्छ । यतिका वर्षपछि पनि देशको हालत उस्तै छ । गरिबीका कारण साहूको ऋणबाट मुक्ति पाउने आसामा थुप्रै युवाहरू वर्षेनि विदेशिएका छन्, गाउँबस्तीहरू सुनसान छन् ।
एउटा सर्जकले गरिबीका कारण उत्पन्न देशको समस्यालाई आफ्ना सिर्जनामार्फत जनसमक्ष ल्याइसकेपछि ती समस्यालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । मुनामदनमा मदन विदेशिनुको मात्र कुरा छैन, ऊ विदेशिएपछि 'साग-सिस्नु जे छ, खाएर खुसीसाथ सँगै बाँचौं' भनेर हरतरहले रोक्न खोज्दा पनि आफूलाई एक्लै छोडेर विदेशिएको लोग्नेको पर्खाइमा दिन गन्दागन्दै अन्त्यमा मदन मर्‍यो भन्ने हल्ला सुनेपछि मृत्युवरण गर्न विवश नारी 'मुना' अनि छोराको वियोगमा थला परेकी वृद्धा आमाको करुण कथा छ । यो अहिले पनि दोहोरिइरहेको छ ।
अहिले लाखौं मदनहरू अरब र कुवेतका खाडीहरूमा पसिना बगाइरहेका छन्, मुनाहरूका लागि, आमाहरूका लागि अनि साहूको ऋणबाट मुक्तिका लागि । तर सपना पूरा गर्नसकेका छैनन् । देवकोटाको जस्तो दयालु 'भोटेदाइ' अरबका खाडीहरूमा पाइँदैनन् । स्वदेशी र विदेशी दलालहरूबाट ठगिएर कैयौं मदनहरू घरको न घाटको बनिरहेछन् । कति विदेशका जेलमा कोचिएका छन्, कति एकसरो लुगामा खाली हात घर र्फकन बाध्य छन् । प्रचण्ड गर्मीमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्दा कति मदनहरूले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन् । भविष्यका सपना फलाउन विदेशिएका मदनहरूको मृत्युपछि कैयौं मुनाहरूको बिचल्ली भएको छ । हरेक महिना वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमध्ये कोही न कोहीको मृत्यु भएको खबर आई नै रहन्छ । कतारमा डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु भएका आश्रतिहरूको आँसु थामिएको छैन । अफ्गानिस्तानमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका युवाहरूमध्ये एकजना विवाह बन्धनमा बाँधिएको केही दिनमै धन कमाउन विदेशिएका रहेछन् । यस्ता थुप्रै घटनाले आज पनि मुनामदनलाई जीवन्तता दिइरहेछन् ।
अतिथि — Fri, 11/19/2010 - 10:39
पाँच मुक्तक (सर्प पाल्न सरकार)